China Jack, jack marindrano, jack mitsangana, orinasa mpamokatra hydraulic sy mpanamboatra | Boda
Jack dia matetika ampiasaina amin'ny ozinina, toeram-pitrandrahana, fitaterana ary departemanta hafa ho fanamboarana fiara sy fananganana hafa, fanohanana ary asa hafa. Ny rafitra dia maivana, matanjaka, malefaka ary azo itokisana, ary azo entina sy ampiasain'ny olona iray.
Jack no fitaovana fampiakarana tsotra indrindra amin'ny haavo kely (latsaky ny 1m). Manana karazany roa izy io: mekanika sy hydraulic. Ny jack mekanika dia manana karazana rakotra sy karazana visy. Noho ny fahaizany manainga kely sy ny asany miasa dia matetika izy io no ampiasaina amin'ny fikolokoloana mekanika ary tsy mety amin'ny fanamboarana tetezana. Ny jack hydraulic dia manana rafitra matevina, asa marin-toerana ary fiasa fanidiana tena, noho izany dia be mpampiasa. Ny fatiantoka azy dia ny haavon'ny fiakarana ary voafetra ny hafainganam-pandehan'izy ireo.
Araka ny fitsipiky ny famokarana samihafa dia misy jack jack mekanika sy jack jack. Tsy mitovy ny toro lalana. Amin'ny fitsipika, ny fitsipika fototra indrindra amin'ny famindrana hydraulic dia ny fitsipiky ny Pascal, izany hoe, ny tsindry ataon'ny ranoka dia mitovy na aiza na aiza. Amin'ny rafitra voalanjalanja, ny tsindry apetraka amin'ny piston kely kokoa dia kely noho ny an'ny piston lehibe kokoa Ny hery dia lehibe ihany koa, izay mitazona ny ranon-javatra.
Noho izany, amin'ny alàlan'ny fandefasana ranoka dia afaka mahazo tsindry samihafa amin'ny tendrony samihafa isika mba hahatratrarantsika ny tanjon'ny fanovana. Ny jack hydraulic antsika mahazatra dia ny mampiasa an'ity fitsipika ity hahatratrarana ny fifindran'ny hery. Ny fitsipiky ny mekanika an'ny jack screw dia ny misintona ny mpihazakazaka miverina, misintona ny claw hanosehana ny fahazoana ratchet hihodina.
Ny fitaovana kely bevel dia mitondra ny kitapo bevelt ary mampiodina ny visy manainga, mba hahafahana manainga na midina ny tanany manainga.
hahatratrarana ny fiasan'ny fihenjanana. Fa tsy tsotra toy ny jack jack.
Ny maha samy hafa ny jack marindrano sy ny jack mitsangana dia: mora ampiasaina, fahafaha manainga lehibe jack marindrano, mety amin'ny fiara lehibe. Ny jack mitsangana dia mora ampiasaina ary mety amin'ny trolley.
Jack mitsangana: mampiasa fitsipika hydraulic, tsy mitovy amin'ny jack mekanika nentim-paharazana, dia fitaovana fananganana kamiao miaraka amin'ny fandidiana tsotra, fiarovana, fahamendrehana, fitehirizana asa ary famatsiana mahery vaika.
Androany, raha mbola ao amin'ny toeram-piantsonana na tobin-dasantsy ianao dia afaka mahita ilay vano hydraulic, amin'ny fampiasana azy io mba hanomezana hery ny zaza afaka manainga fiara.
BOSENDA dia mamatsy andiana jack ho an'ny tsena any ivelany, afaka manao OEM sy ODM izahay, raha mila fanazavana fanampiny, aza misalasala mifandray aminay.
Previous: Basy lakaoly miempo mafana, basy lakaoly elektrika, basy rivotra mafana, basy welding plastika, mpitroka tin
Jack miharo volo